बागलुङका सबै स्थानमा बाम उमेदवार विजयी, काँग्रेस क्लीन स्वीपमा ! – ebaglung.com
बागलुङका सबै स्थानमा बाम उमेदवार विजयी, काँग्रेस क्लीन स्वीपमा !
२०७४ मंसिर २३, शनिबार ०८:२३	Top News, थप समाचार
राम सुवेदी, बागलुङ २०७४ मंसिर २३ । बागलुङका दुई निर्वाचन क्षेत्रका प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा ४ प्रदेश सभा सदस्यहरुमा बाम गठबन्धनका उमेदवारहरु भारी मत सहित विजयी भएका छन् । प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभामा गरि ६ स्थानमा यहाँका तीन बाम पार्टिहरु नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चा २÷२ सिट बाँडेर काँग्रेससँग मोर्चाबन्दी गरि चुनावी मैदानमा थिए ।
जस अनुसार बागलुङ जिल्ला क्षेत्र नं १ को प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा बाम गठबन्धनका तर्फबाट एमालेका डा.सुर्य पाठक विजयी हुनुभएको छ । उहाँले ३३ हजार ६ सय ५७ मत लिएर बिजयि हुनुभएको हो । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दिमा नेपाल सरकारका पूर्व राज्यमन्त्री समेत रहनुभएकी नेपाली काँग्रेसकी चम्पा खड्काले २० हजार ६ सय १६ मत ल्याएका थिए । १३ हजार ४१ मतान्तरले खडकालाई पछिपार्दै पाठक विजयी भएका हुन् ।
यस्तै प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा भारी मतान्तर सहित बाम गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका देबेन्द्र पौडेल बिजयी भएका छन् । पौडेलले २८ हजार ८ सय २७ मत प्राप्त गरेका छन् । उनका निकटतम प्रतिद्धन्दी नेपाली काँग्रेसका पूर्व साँसद निरज पुनले १९ हजार ९ सय ५ मत प्राप्त गरेका छन् । पौडेलले पुनलाई ८ हजार ९ सय २२ मतको फरकमा पराजित गरेका छन् ।
यता प्रदेश सभा सदस्य तर्फ बागलुङ क्षेत्र १ को प्रदेश १ बाट बाम गठबन्धन अन्तरगत नेकपा एमालेका ईन्द्रलाल सापकोटा थापा बिजयी हुनुभएको छ । यहाँले १७ हजार ९ सय १३ मत ल्याएका थिए । उनका निकटतम प्रतिद्धन्दी नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापति दिपेन्द्र बहादुर थापाले ११ हजार ९ सय ८४ मत ल्याएका थिए । सापकोटाले थापालाई ५ हजार ९ सय २९ मतले पराजित गरेका छन् ।
भने क्षेत्र २ को प्रदेश २ बाट बाम गठबन्धन अन्तरगत राष्ट्रिय जनमोर्चाका टेकबहादुर घर्तिले ११ हजार ८ सय ८४ मत लिएर विजयी हुनुभएको छ । उनका निकटतम प्रतिद्धन्दी नेपाली काँग्रेसका जीत शेरचनले ८ हजार ६ सय २४ मत ल्याएका थिए । घर्तिले शेरचनलाई ३ हजार २ सय ६० मतले पराजित गरेका छन् ।
यस्तै प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नं. २ को १ बाट बाम गठबन्धन अन्तरत नेकपा माओवादीका चन्द्रबहादुर बुढा सागर बिजयी भएका हुन् । बुढाले १७ हजार ४ सय १५ ल्याएर विजयी भएका हुन् भने उका निकटतम प्रतिद्धन्दी नेपाली काँग्रेसका मञ्जेश बम मल्लले ११ हजार ५ सय ४६ मत प्राप्त गरेका छन् । मल्ललाई बुढाले ५ हजार ८ सय ६९ मत अन्तरले जितेका हुन् ।
यस्तै बागलुङ क्षेत्र १ को प्रदेश २ बाट बाम गठबन्धन अन्तरगत राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापा बिजयी हुनुभएको छ । उहाँले १४ हजार ३ सय ७२ मत प्राप्त गरेका छन् । उका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली काँग्रेसका पूर्व साँसद समेत रहनुभएका प्रकाश पौडेललेले ८ हजार २ सय ४६ मत प्राप्त गरेका छन् ।
यो मत परिणमसँगै काँग्रेस बागलुङमा क्लीन स्वीपमा परेको छ । यस अघि जिल्लामा किल्ला बनाएको काँग्रेसले आफ्नो स्थान कायम गर्न सकेन भने बाम गठबन्धनले बागलुङ जिल्लालाई आफ्नो किल्लाको रुपमा स्थापित गरेकाछन् ।
गुल्मीमा मतगणना जारी, एमालेका ज्ञवाली र बिष्ट भन्दा काँग्रेसका भण्डारी र केसी पछी
पर्वतमा बामगठबन्धनको अग्रता कायमै, गिरी, जोशीको भन्दा ३८५२ मतले अगाडी !